Saacado ayaa ka harsan Go'aanka ICJ ee berrito | shumis.net
Home » bada soomaliya » Saacado ayaa ka harsan Go'aanka ICJ ee berrito
Muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya waa mid aad u muhiim ah. Waxay labada dal isku haystaan bad uu bedkeedu yahay qiyaastii 142,000 km oo laba jibbaaran. Waa bed ka baaxad weyn dhulka Somaliland oo dhan. Waxaana la rumeysan yahay aagga badweynta India ee ay Soomaaliya iyo Kenya ay lahaashaheeda ku muransan yihiin in uu ku jiro kheyraad badan oo dabiici ah oo uu ka mid yahay shidaal.
ICJ waa mid ka mid ah Hey'adaha Qarammada Midoobay. 1945 ayaa la unkay. Waxaa ay ku saleysan tahay Axdiga Qarammada Midoobay. Xarunteedu waa Hague, dalka Netherlands. Waxaa ay ka kooban tahay 15 Garsoore oo midkiiba 9 sano ay xilka u doortaan Golaha Guud ee Qarammada Midoobay oo ay xubno ka yihiin 193 dal iyo Golaha Ammaanka ee Qarammada Midoobay oo ay xubno ka yihiin 15 dal. Garsoore kastaa waa in uu helaa aqlabiyadda codadka labada Gole si uu xilka u qabto ama uu u sii hayo.
Hadda waxaa Guddoomiye u ah Ronny Abraham oo dhalashadiisu ay tahay Faransiis kuna dhashay magaalada Alexandria ee dalka Masar. Guddoomiye ku Xigeenka ICJ waa Cabdiqawi Yusuf oo ah Soomaali.
Title: Saacado ayaa ka harsan Go'aanka ICJ ee berrito